किनभने, देशभर पाँच–सातजना संक्रमित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय कोषबाट १० अर्ब खर्च भयो भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो ? भनेर प्रश्न उठेकै हो । अहिले कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको वीरगञ्जमा पिसिआर किट छैन । परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाउनुपर्छ । पहिल्यै १० अर्ब खर्च भएको भए अहिले पर्याप्त औषधी र प्रयोगशाला हुनुपथ्र्यो । तर, भेन्टिलेटर अभावमा नेपालीले मर्नुपर्ने दिन आइपुगेको छ ।
तीनै तहका सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यो देखेका कार्यकर्ता अब आउने चुनावमा थोरै पैसामा परिचालित हुने अवस्था नै छैन । तिनका पनि त अपेक्षा छन् ! जन आस्थामा समाचार छ ।